R/Wasaare Kheeyre Oo Ka Baaqday Safarkii Beledweeyne Iyo Sababta La Ogaaday -
HomeWararkaR/Wasaare Kheeyre Oo Ka Baaqday Safarkii Beledweeyne Iyo Sababta La Ogaaday
R/Wasaare Kheeyre Oo Ka Baaqday Safarkii Beledweeyne Iyo Sababta La Ogaaday
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ka baaqday safar lagu waday inuu maanta ku tago magaalada Beledweyne, iyadoo warar kala duwan uu ka soo baxayo dib u dhiciisa.
Ilo ku dhow dhow Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegaya in wafdi horudhac u ahaa Ra’iisul Wasaaraha oo isugu jiray xubno ka tirsan Xafiiskiisa iyo Ciidamo oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha lagu wargeliyay inay dib u soo laabtaan, maadaama uu Ra’iisul Wasaaruhu baaqday.
Xubin ka tirsan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa ii xaqiijiyay in safarkooda uu dib u dhacay, kaddib markii lagu soo wargeliyay in roobab ay ka da’een garoonka diyaaradaha Beledweyne, ayna adag tahay inay diyaarad ka degto.
Dhinaca kale Wafdiga Madasha Xisbiyada Qaran ee ay hoggaaminayaan Madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayaa saaka loo diiday inay ka dhoofaan garoonka, iyaga oo ku sii jeeday Beledweyne.
Maamulka Garoonka Diyaaradaha ayaa la sheegay inay ku wargeliyeen wafdiga Madasha Xisbiyada in aanay ka dhoofi karin garoonka.
Ugu danbeey Waxaa goor dhow soo baxay ayaa iyana sheegaya in wafdiga Ra’iisul Wasaare Kheyre ay iyana ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha Muqdisho, gaar ahaan qeybta Afisyooni ama Hangarka, halkaasoo la sheegayo inay iyana ka bixi rabaan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ku soo socday qeybta VIP-da Garoonka uu ka laabtay, kaddib markii lagu wargeliyay inay VIP-da Garoonka ay ku sugan yihiin Madaxweynayaashi hore.